Notanan’i Shina Ilay Mpisolovava Rehefa Avy Nanatrika Fivoriana Tao Tiananmen · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Mey 2014 0:10 GMT
Vakio amin'ny teny Swahili, Français, বাংলা, Español, македонски, English
Nogadrain'i Shina ilay mpisolovava malaza Pu Zhiqiang noho izy voampanga ho “nampisy korontana,” hita fa fikasana hanakana ireo mpikatroka tsy hankalaza ny fitsingeran'ny faha-25 taonan'ny famoretana ny fihetsiketsehana manohana ny demaokrasia tao amin'ny Kianjan'ny Tiananmen izany.
Araka ny filazan'ny gazety South China Morning Post, nogadrain'ny polisin'ny Beijing tahaka ny mpamono olona i Pu Zhigiang rehefa avy nanatrika ny fivoriana ho fahatsiarovana ny famoretana ny hetsika hoan'ny demaokrasia 1989 sy “handinihana ny halaliny sy ny vokatr'izany ary hitaky ny amin'ny hanaovana fanadihadiana mikasika ny marina tamin'ny 4 Jiona.”
Sarin'i Pu nandritra ny fihetsiketsehana 1989 tao Tiananmen. Sary nivezivezy tao amin'ny Twitter.
Noho ny tsikerany mivantambatana ataony mikasika ny politika ofisialy, narahin'ny polisy maso i Pu Zhigiang, ka notànana sy natao famotorana imbetsaka. Noraràna tsy hiditra tamin'ireo sehatra bilaogy madinika ao Shina izy tamin'ny 2013 rehefa nampiasa izany ho fitsikerana ampahibemaso ny mpitarika efa misotrorononon'ny Antoko Komonista Zhou Yongkang.
Voafafa haingana ny hafatra nalefan'ilay mpisolovava ao Bejing Deng Shulin:
Mpilalao horonantsari-mihetsika malaza Shinoa Zhang Ziyi nangataka tamin'ireo mpanjohy azy ao amin'ny Weibo mba hijery horonantsary mikasika ny fomba fanandratan'ireo mpisolovava ny rariny:
Mpanao gazety Sui-Lee Wee nilaza lahatsoratra iray nosoratan'i Pu tao amin'ny Twitter: